दोहोरी गीत Archives | NEPALI Live
गीतहरु, दोहोरी गीत
Home » दोहोरी गीत
Category - दोहोरी गीत
“भिरमा सेती गाई” आए पछि ….
सर्वाधिक महँगो गायिका भनेर चिनिएकी बिष्णु माँझी र बिरु लामाको स्वरमा “ भिरमा सेती गाई” बोलको लोक दोहोरी गीत यो साता चर्चामा छ। शिव हमालको शब्द र संगीतमा यूटूबमा सार्वजनिक भएको यो गीत ३ लाख माथि हेरिएको छ। चर्चित कलाकार सागर लम्साल वले र रूबीना अधिकारी अभिनित म्यूज़िक भिंडियोंको...
रमेश प्रसाई र कल्पना दाहालले पहिलो दोहोरीमा पाएको चर्चा दोश्रोमा पनि यथावत रहेको छ। दोश्रो भाग आएको दोश्रो दिन १६ लाख माथि यूटूब भ्यूज सहित १० हजार प्रतिक्रिया दर्शकले दिएका छन। शुभेच्छुकहरूले आशा राखें बमोज़िम यो जोडीको बिहे नहुने पक्का भएको खबर बाहीरिएको छ। साथै रमेशले अब...
चर्चित बाल दोहोरी गायिका कमला घिमिरे , राजु परियार र रंजन थापा मगरको स्वर, कमल बिजीको रचना र प्रदीप अधिकारीको संगीतमा “मस्यौरी” बोलको गीत भर्खरै आएको छ। एकै दिनमा ३ लाख यूटूब भ्यूज पुगेको यो दोहोरी गीतमा दीपेन्द्र तिमल्सीनाको निर्देशन रहेको छ।
समसामयिक विषयमा निकै कडा र प्रष्ट बिचार राख्ने रमेश प्रसाई लाई नचिन्ने कमै नै होलान। अब उनको परिचय थपीएको छ, दोहोरी गायक। त्यो पनि प्रत्यक्ष रूपमा इंद्रेणीमा अर्की चर्चित दोहोरी गायिका कल्पना दाहालसंग गाएपछि। रमेशको यो पहिलो पटकको थियो तर कल्पनाले त कैयो दोहोरी छिचोलेकी थिइन ।...
नेपाली लाईभ- ट्रेण्डिङ गीतहरु
“नाटकै हो” बोलको गीत पनि भाईरल होला त?
इण्डियन आइडल विजेता प्रशान्त तामाङको स्वरमा “आगो पिएर बाच्ने” गीत चर्चामा
सूरज सिंह ठकुरी र रेश्मा घिमिरे अभिनित गल्ती दोश्रो भाग चर्चामा
गायिका मेलिना राईले गाएको त्यो “एक दिन”!
कृष्णलीला चलचित्रको “कुनै दिन त्यो कथामा” बोलको गीत सार्वजनिक
“जूनेली रात नि भन्छ, म भोली फेरि जानु नै रैछ”
“चौतारीमा बसी मैले रुन जानेकै मायालु, तिम्ले छोडेपछि”
भाग्यमा खोट नभएको गीत!
फुलबुट्टे सारीको जोडी अभिनित “टाढा भएपनि” बोलको गीत मन पराईदै
“खोलै खोला तिरै तिर” अगाडी बढेको नितेश जंगको गीतहरू
“आशुको अर्थ” यूटूब हिट्स १.७ करोड़ पुगेकोमा गायक शिव परियारको प्रसन्नता !
“मायालु तिमी कता छौ” – सिरिरिरी सिरिरि हावा लिएर फेरी खोज्दै आयो !
नेपाल आइडलमा प्रबिन बेडवालको मूटु छूने आवाज़ अहिले सम्मको यादगार!
“ज्यानै खायो त्यही मोरीको मायाले, जिस्काउछ आज आफ्नै छायाले”
“ल है” आए पहिलो गीतमा स्वर भर्दै चर्चित मोडेल ओबी रायमाझी
रामकृष्ण ढकाल र मेलिना राईको स्वरमा “जुनी जुनी” बोलको गीत सार्वजनिक
“तिमी के को जान्ने”- हरिबंशको गाईजात्रे गीत!
चस्मा लाएर आए बुद्धिसागर
चर्किएको माया फैलीदै
अमेरिकन आइडलमा निर्णायकको मन जीते नेपालीले !
तीज नजिकीदै गर्दा चर्चित गायक पशुपति शर्माले भने- “निदाईन ३ दिन” !
“सोचे झै जिन्दगी रैनछ” गीतको डान्स स्टेप टिक टकमा हिट हुदै !
“तिमी उता म यता साहिली, मन सन्चो कहा छ र ?”
सिम्पलको गीत फेरी चर्चामा
“मेरो रातो गलबन्दी कता हरायो?”
सबैको मन जित्ने एउटै “गल्ती”!
तीजमा “घिउ छैन बट्टामा” भन्ने को?
पल शाह, माग्ने बुढ़ा अभिनित “इस” बोलको गीत चर्चामा
“बेरङ्ग यो जिन्दगीमा, आज रङ्ग भर्न खोज्दैछु”
सुमित पाठकको दोश्रो गीत “आउ वर” मा देखिए असिफ शाह र बर्षा राउत
“तिमी बिजी टिक टकमा, मेरो भो बिजोग” गाउदै सम्झना ओली र नेपाल आइडल बिजेता रबि ओड
“पिलायो साथीले”, “क्यादामी भो” भन्दै आयो, “नाचे फिरिरी”!
“किरण गयो त फन पनि गयो”: नेपाल आइडल निर्णायक इंदिरा जोशी
तोरी तेल लाएर कपाल साच्चै कालो होला?
“डुप्लीकेट माया” हिट भएको सुन्नु भएको छ?
आयुषको “माया” चर्चामा
१२ बर्षीय चर्चित दोहोरी गायिकाले भनिन्- “लरिलरि लै रुन्छु बरिलै”
“मैलो भए हुन देउ, धोए उनको याद आउछ”
आउछौ कि जस्तो लाग्छ, तै पनि…..
कमेडी चैम्पीयन: उत्कृष्ट ३ मा हिमेश पन्त, सुमन कार्की बाहीरिए!
कमेडी चैम्पीयन सेमी फ़ाइनल :हिमेशको प्रस्तुति बेजोड़, सुमन र खबपु को उतिकै दाबेदारी / उत्कृष्ट कमेडीयन चैत्र १ मा घोषणा हुने !
कमेरोंले पोतेको २ तले घर १० लाख पटक हेरियो !!!
“माया मारेर, घाम भन्दानी जुनेली रात प्यारो हो”- दर्शकले माया गरेर अग्रता कायमैं !
कमेडी चैम्पीयन: उत्कृष्ट ३ को घोषणा- हिमेश, सुको र खबपु !
साताका चर्चित गीत “सिल्की कपाल” र “रिबन केसैमा”
“बिच्च बिच्चमा”-२ लीएर आए दुर्गेश थापा, तीजमा फ़ोटो खिच्न अनुरोध !!
हेरौ नेपाली चलचित्र “आमा” यूटूबमा
नाज़िर, स्वस्तिमा र रियासा अभिनित “मुना” गीत सार्वजनिक
तिम्रो घरको बरीपरी आएर बसेको त्यसै हो र ?
बेसारले रंगाउन बिच्च बिच्चमा आए दुर्गेश !
“झूमा झूमा“ले यूटूबमा ९० लाख कटाऊदा गायक प्रमोद खरेल भए खुसी !
बधाई छ लीएर आए पवन गिरी
सागर आलेको “सम्झना” आयो !?
पानी पधेरो दोश्रो भाग पनि चर्चामा
पहिलो म्यूज़िक भिडियो “रुईको सिरानी” मा नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ सम्झाउदै टिक टक स्टार
सीमा मिचेको विरोध गर्दै अर्कों रयापमा आए सुदिन !
ट्वीनी गर्ल्ससंग नाच्दै पल शाह
यादगार गीत संगीत
सुमित पाठकको “समाचार“ सुन्नुभयो?
खेल मैदानमा “किन यस्तो भो”!
नाजिर हूसेन र आँचल शर्माको जोड़ीले “बागमतिको पुल” उदघाटन गरे !
कति खुसी भए म त “थिर” तिमीले मलाई छान्दा…
फूलबुट्टे सारी, सबै गीत भन्दा भारी!
Copyright © 2021 नेपाली ट्रेण्डीङ गीतहरुको समीक्षा लगायत अन्य बिषय समेटीएको यस नेपालीलाइभ डट कममा सल्लाह र यूटूब भिडियो समीक्षाको लागि [email protected] मा सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो फेसबुक पेज फलो गर्नुहोला। तथा नेपाली LIVE यूटूब चैनल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।